Vive Latino 2013: Fahatezàny, Tarika Shiliana Ary Feon’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2013 0:33 GMT
Mbola ho toeran'ny Fetibe Ibero-amerikana amin'ny Kolontsain'ny Mozika “Vive Latino” indray ny tanànan'i Mexico. Tahaka ny isan-taona, Artista mpihira avy amin'ny gadona samihafa saingy manana ny lazany iraisampirenena no handray anjara amin'izany fetibe izany.
Tamin'ny andiany farany ny hetsika dia nahitana ny fiakarana an-tsehatr'i Javiera Mena (Chile), Los Caligaris (Arzantina), El Columpio Asesino (Espaina), Molotov (Meksika) ary Fatboy Slim (Angletera), miaraka amin'ny tarika maro hafa.
Amin'ny andiany faha-14 ny “Vive Latino” hampivondrona ny mpiara-nanorina ny Britpop, Blur (Angletera), ny ankamaroan'ny mpandray anjara amin'ny teny anglisy, sy ny tarika Latina malaza amin'ny sehatra iraisampirenena izay ahitana ny Los Fabulosos Cadillacs (Arzantina), Panteón Rococó (Meksika) ary ny Los Amigos Invisibles (Venezoelà). Hipoitra ao anatin'ny tarika zato handray anjara handravaka ny hetsika ihany koa ny Violadores del Verso (Espaina), Yeah yeah yeahs (Etazonia) ary ny tarika mpanao rock efa zokiolona El Tri (Meksika) izay azonao jerena ato [es] ny lisitr'izy ireo .
Milaza toy izao [es] momba ny fanombohana sy ny fivoaran'ny “Vive Latino” ny mpikarakara ny fetibe:
Talohan'ny Fetiben'ny kolontsaina mozikaly Ibero-amerikana, Vive Latino, efa nahitana fetibe isan-karazany ihany teo amin'ny tantaran'ny rock ao Meksika, saingy tsy misy ny nahavita nanohy isan-taona. Takian'ny olona ny fametrahana hetsika mafy orina ato amin'ny tanàna lehibe indrindra manerantany, saingy mila fitokisana, handresena lahatra ireo be fanahiana fa tsy ny tapakila no tena zava-dehibe fa ny fandaharam-potoana (hatsarany). Tsy maintsy natao izay nikirakirana ny kalitaony, ny famorakana, ny fampitaovana ary ny fampifantohana ny fampitam-baovao nandritra ny roa taona hahamafy orina azy.
Nitohy ny lahatsoratra:
Camila Moreno, mpihira Shiliana. Sary avy amin'i Pablo Quiroz ambanin'ny lisansa Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)
Anio, amin'izao andiany faha-14 ny VL izao, tsy eto Meksika ihany no fanta-daza ny fetibe, fa manerana an'i Ibero-amerika noho ny fahamaroan'ny mpandray anjara sy ny fisian'ireo tarika vahiny (iraisampirenena) ao anatin'ny programany. Lasa izy indray no fitaratra ho an'ireo izay te-hanaraka mivantana ireo artista misongadina sy ireo izay namela marika farany ny eny an-tsehatra. Tonga Soa eto amin'ny feo vaovao sy amin'ny andian'ny taona 2013 izay hahitanao mpihira tsy ampoizina amin'ny famalifaliana ireo hanatrika ny Foro Sol.
Raúl Bustamante [es] avy amin'ny LifeBoxset.com tsy nanadino ny fitodihana amin'ny feminisma ary nanasongadina:
Ao anatin'ny tarika sy mpihira 127 izay hiantsehatra mandritra ny efatra andron'ny fetiben'ny Vive Latino 2013, mihoatra ny 15 no tarihan'ny vehivavy iray na mihoatra, eo ambadiky ny microphone ary tsy anavahana karaza-mozika, hampihiratra antsika amin'ny feony. Mandritra ity andiany ity, hahita vehivavy avy Meksikana sy vehivavin'ny firenena hafa, izay mendrika ny hatrehina mivantana, eny amin'ny sehatra samihafa isika.
Nanavaka ny isan'ny Shiliana handray anjara ao anatin'ny fandaharam-poroanan'ny fetibe i Diego Sepúlveda [es] avy amin'ny Panamérika:
Mpitendry mozika sy vondrona Shiliana fito no handray anjara mandritra ny andiany manaraka amin'ny Vive Latino amin'ny 14-17 amin'ity volana Marsa ity. Isan-karazany eo amin'ny karazany sy ny antso ny fantina amin'ity taona ity. Nalahatry ry zareo izay efa nitsidika ny tanin'ny Azteka sy ireo hahazo tombontsoa amin'ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny iray amin'ny firenena izay liana dia liana tokoa amin'ny vokatra Shiliana nandritra izay taona faramparany lasa izay.
Ireto avy ireo tarika izay tondroin'i Sepúlveda: Aiken, Alex Anwandter, Camila Moreno, Chico Trujillo, Gepe ary Mostro.
Ny fifantohana amin'ny tontolo iainana kosa tena nozarain'i México [es], ahitana toromarika ahafahan'ny mpanatrika hifanakaiky kokoa amin'ny [fanajana ny] tontolo iainana:
Tao anatin'ny roa taona izay ny mpikarakara ny Vive Latino no niezaka handravona ny antsipirihany sasantsasany amin'ny fetibe izay mifantoka amin'ny fahatezàny, mba ahitantsika mpijery mampandroso ny raharaha amin'ny alalan'ny hetsika izay eo ampelatanantsika. Manolotra hetsika fanalahidy telo izahay:
1. Raha azo atao, miezaha mba ho voky no tonga any; izany dia noho ny ataoko fa efa voamarikao ny fahabetsahan'ny fako ateraky ny hetsika mandritra ny fotoana anatontosana azy. Raha tonga aloha ianao, matin'ny hanoanana na tena mila ny zavatra amidy mandritra ny fetibe, Ampirisiho ny mpivarotra [hanangona ny fako ho azo ahodina ampiasaina indray = recycle]. Raha mbola te-hanampy ianao, ataovy izay ampiasany indray ho anao ny lovia vao nihinananao teo ary ataovy izay hampiasanao mosoaran-databatra vitsy indrindra araka izay azo atao mba hialana amin'ny fandaniam-poana. Tsy hampararirary anao ny fahatsiarovana ny habetsahan'ny fako arianao anaty fanariana zaoridira.
2. Lohahevitra iray hafa manontolo ihany koa ny veran-dabiera – araho ny toromarika vao nolazainay etsy ambony.
3. Miaraha mandeha amin'ny fiara iray, na raha ny tsaratsara kokoa, Mandraisa fiara fitateram-bahoaka iraisana hialana amin'ny fitohanan'ny fiara, izay miteraka setroka kokoa noho ny fivezivezen'ny fiara tsy miova halakim-pandeha (ary eo an-tampon'izany ny fiharatsian'ny fahitana sy ny tabataba aterany).
4. Ho an'ny mpifoka sigara: manorohevitra anao izahay hitondra fasiana sigara sy hiala amin'ny fandaniam-poana ateraky ny tranon-tsigara baoritra. Misy ihany koa ny fasiana tain-tsigara azo entina mandehandeha; Miezaha hividy iray ho entina amin'ny fetibe mba hialana amin'ny fanariana tain-tsigara eny rehetra eny [eny amin'ny tany]. Raha manary ny tain-tsigara ao anaty fanariam-pako ianao, dia manao izay hampiraikitra ny fako amin'ny gorodona.
Tandrovy ny tontolo iainana ary ankafizo ny tarika tianao indrindra ao amin'ny Vive Latino 2013!
Ao amin'ny Twitter, ny tenifahatry ny hetsika dia #VL13.
“Vive Latino”, amin'izao andiany faha-14 izao, dia hotontosaina ao Foro Sol (ao afovoany atsinanan'ny renivohitra Meksikana) ny 14, 15, 16 ary ny 17n'ny volana marsa amin'ity taona ity. Afa-mandray mpijery hatramin'ny 55.000 isan'andro anatontosana ny rindra-kira ny Toerana handraisana izany.
Tsy aritra: Nohamafisin'ny mpanomana tamin'ny alin'ny 13 Marsa fa nanafoana ny fandraisany anjara (noho ny antony ara-pahasalamana araka ny voalaza) ilay mpihira sady mpamoro-kira Britanika Morrissey, ka vokatr'izany ny hetsika rehetra nomanina ny andron'ny Alakamisy 14 marsa dia hampidirina amin'ny Zoma faha-15 n'ny volana. Raha te-hahita ny antsipirihany bebe kokoa dia tsidiho ny habaka ofisialin'ny“Vive Latino”.